२२ घण्टा ब्याट्री टिक्ने ल्यापटप अब नेपालमा : कति पर्छ मूल्य ? – Khabaarpati
October 5, 2020 goodmamLeaveaComment on २२ घण्टा ब्याट्री टिक्ने ल्यापटप अब नेपालमा : कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौ । असुसका दुई नयाँ ल्यापटप जेनबुक थर्टिन युएक्स ३२५ र जेनबुक फोर्टिन युएक्स ४२५ नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएका छन् । असुसका यी दुवै ल्यापटपहरु आफ्ना पूर्ववर्ती ल्यापटपहरुको तुलनामा निकै हलुको र पातला छन् । कहिलै ह्याङ् नहुने दावी गरिएको छ । यसमा २२ घण्टाको ब्याट्री लाइफ र नयाँ एज टु एज किबोर्ड डिजाइन छ ।
यसमा १० औं पुस्ताको इन्टेल कोर प्रोसेसर, आठ जीबीसम्मको र्‍याम र ५१२ जीबी एसएसडी स्टोरेज छ । यसमा रहेको वाईफाई सिक्सले ल्यापटपलाई छिटो तथा सजिलो पर्फमेन्सको लागि मद्दत गर्दछ ।दुवै ल्यापटप ग्रे र ग्लसी सेड गरी दुई वटा कलर अप्सनमा उपलब्ध छन् । दुवै ल्यापटपमा जेन्युन विण्डोज टेन होम अपरेटिङ सिस्टम र इन्टेल यूएचडी ग्राफिक्स प्रयोग गरिएको छ ।
ब्लुटुथ ५।० प्रयोग गरिएका यी ल्यापटपमा थ्रीडी आईआर एचडी क्यामेरा राखिएको छ । यी दुवै ल्यापटपमा फूल साइज एचडीएमआई र यूएसबी टाइप ए पोर्ट, दुई वटा हाईस्पिड थण्डरबोल्ट थ्री यूएसबी–सी पोर्ट र एउटा माइक्रो एसडी कार्ड रिडर रहेका छन् ।
२ अक्टोबरदेखि देशभरका कम्प्युटर स्टोर तथा नागमणीको वेबसाइटमा यी ल्यापटपहरु उपलब्ध हुनेछन् । नेपाली बजारमा जेनबुक थर्टिनको मुल्य १ लाख ३२ हजार २ सय २२ रुपैयाँ र जेनबुक फोर्टिनको मुल्य एक लाख २७ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ राखिएको छ ।
सुशान्तको बारेमा पहिलोपटक बोले अक्षय कुमार, हेरौँ के भने(भिडियो)
June 2, 2021 goodmam